Nhau - Musangano wakasarudzika
Na3: 30pm muna Nyamavhuvhu 7, 2020, kambani yedu yakaita musangano mukuru wechigadzirwa pakati peYongkang dzimbahwe. Mabhizimusi kubva kuindasitiri ye Hardware akakokwa kuti vapinde musangano uyu. Pasi pegadziriro yedu yekuchenjerera, kambani yedu yakaratidza JH-168A 2200W nyowani yekuparadza magetsi nyundo, JH-4350AK yemagetsi yekuparadza sando, JH-150 yemagetsi nyowani yekuparadza sando uye zvimwe zvigadzirwa zvitsva kune vateereri.
Mukuenderera mberi kwekutsvaga kwekuita uye hunyanzvi, yekambani yedu yekutsvagisa chigadzirwa nekusimudzira zvinotevera maitiro, zvichigonesa kukwidziridzwa, kugadzira akateedzana ezvigadzirwa zvakagadzirwa chete naJiahao. Panguva imwecheteyo, mune chigadzirwa dhizaini uye kugadzirwa kuita inoenderana budiriro uye hunyanzvi. Kunyanya mune zvigadzirwa zvemafuta, isu tinoramba tichivandudza mhando nyowani, basa rekuchengetera, kugona, kune ramangwana rekutengesa zano, isu tinopawo iwo anoenderana mazano, uye tinotungamira ramangwana chigadzirwa kutengesa nzira.
Zvekuvandudzwa kweramangwana uye kuronga kwekushandura kweJiahao, kambani yedu yakaita tsananguro yakadzama. Munguva yeupfumi hwehosha, isu tinofanirwa kushandura nekuvandudza uye nekugadzira mhando nyowani nematanho e-commerce. Chete nenzira iyi ndipo patinogona kugovana musika yekuyerera chikamu uye nekuona kukunda-kuhwina kugarisana.
Munhu wese aifarira musangano. Vashandi vepa-saiti vakatsanangura nokushivirira uye vakaratidza zvigadzirwa zvitsva, kusanganisira chitarisiko chechigadzirwa, mashandiro ainoita nemazvo, uye dhizaini dhizaini, maficha, mashandiro, nezvimwe, kuitira kuti vefrancisees vagone kuve nekunzwisisa kwakazara kwechigadzirwa chimwe nechimwe uye kusimbisa zvirongwa zvavo mune zvakaitika.
Isu tinoshuvira kuti kubudikidza neratidziro iyi, tinogona kupfuudza ruzivo rwekusimudzira kwekambani yedu mune ramangwana, uye kudzidza zvakawanda nezve ruzivo rwepamusika ruzivo uye ruzivo rwevatengi.